Homeसमाचारतोलामा रु ५०० ले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा कारोबार हुँदैछ?
March 3, 2021 admin समाचार 5981
स्थानीय बजा’रमा आज पहेंलो धातुको मूल्य पुनः उकालो लागेको छ । तोलामा नै मङ्ग’लबार रु एक हजार सात सयले घटेको सुनको मूल्य आज भने रु ५०० बढेको हो । नेपाल सुचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मङ्गलबार तोलामा रु ८७ हजारमा कारो’वार भएको छापावाला सुन आ’जका लागि भनेरु ८७ हजार ५०० मूल्य निर्धारण भएको छ ।
यस्तै तेजाबी सुन मङ्गल’बार तोलामा रु ८६ हजार ५५० मा कारोवार भएकामा आज भने तोलामा रु ८७ हजार ५० मूल्य निर्धारण भएको छ । यस्तै चाँदी तोलामा नै २५ ले वृद्धि भएको छ । चाँदी प्रतितोला रु एक हजार २९० मा मङ्गलबार कारोवार भए’कामा आजका लागि भने रु एक हजार ३१५ मूल्य निर्धा’रण भएको छ । रातोपाटी बाट
सबैभन्दा पहिले म अलिकति प्रतिटि’प्पणी राख्छु । हामी मान्छेहरु भिन्नाभिन्नै छौँ । सबैका औँठाको छाप फरक छ, आँखाका चिन्हहरु फरक फरक छन् । तर हामी मान्छे एउटै पनि छौँ । हाम्रो जेनेटिक कोड हेर्ने हो भने ठूलो हिस्सा मा’छासँग मिल्छ ।
प्रणा’लीको कोषबाट कुरा गर्दा हाम्रा विशिष्ट दुःख पनि छन् । हाम्रा दुःखको एउटा हिस्सा संसारभरिकै मान्छेहरुको दुःख हो । त्यसो हुँदा राजनीतिक दलहरुले उपनिवे’शीकरण लादेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ पु’नर्विचार गरिनुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ ।
हाम्रा राज’नीतिक दलहरुमा केही समस्या छन् । यी समस्या फेरिए’को परिस्थितिमा पैदा भएका समस्याहरु हुन् । यी समस्याको सानो अंश कुनै बेलामा सबलता थियो । उदा’हरणका लागि एउटा कार्यकर्ता र नेताबीचको पहुँच अहिले असाध्यै घटेर गएको छ । जतिखेर अप्ठ्यारो बेला थियो, हाम्रा ल’गभग सबै राजनीतिक पार्टीहरु सैनिक सङ्गठन हुँदै आएका हुन् । सैन्य संरचना थियो, युद्धबाट आएका हुन् । काँग्रेस पनि त्यही बाटोबाट आएको हो, कम्युनिस्ट पार्टीहरु पनि त्यही बा’टोबाट आएका हुन् । यो सबलता थियो, जसले हाम्रो आन्दो’लनलाई जोगायो ।
लामो सङ्घ’र्षपछि अहिले राजनीतिक दलहरुमा समावेशीकरणको मुद्दा लागू भइसकेको छैन तर मुद्दाका रूपमा स्था’पित छ । केही सबलताहरु पनि छन् । तर दुःखको कुरा कस्तो छ भने बदलिएको परिवेशमा हाम्रा कार्यशैली र प्र’णाली फेर्न सकिएन । उदाहरणका लागि, म राजनीतिमा भर्खर भर्खर सुरु गर्दाखेरि मैले घनश्याम दाइलई चिनेको हुँ । शङ्करदेव क्याम्पसको विप’रीततर्फको एउटा घाम नला’ग्ने कोठामा बसेर रिभिजिटिङ मार्क्सिजम भन्ने एउटा कोर्स चल्दै थियो । त्यो भनेको वि.सं. ५८÷६० तिरको कुरा हो । तर अहि’लेसम्म पार्टी फेरिएन ।
यो व्यव’स्थामा दलहरुको कार्यशैली सुधार्नका लागि २/३ वटा काम सुरु गर्नुपर्छ होला । पहिलो, यो व्यव’स्थामा हामीलाई राजनीतिक दल चाहिएको चुनाव लड्न हो । त्यसो हुँदा चुनावको प्रणालीमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने राजनीतिक दलहरु यस्तै हुन्छन् । चुनावमा खर्च हुने पैसा, चुना’वमा प्राप्त हुने टिकट, चुनावको चिन्ह लगाय’तका केही प्रणालीमा हामीले काम गर्नु पर्नेछ ।
कुराले मात्रै पार्टी न’फेरिने रहेछ । त्यसो भए के गर्ने त ? नियमहरु राजनीतिक दलले फेरिहाल्छन् । आज एउटा बनायो, उसैको हातमा छ नियम । संविधानमै लेखेको कुरा त माने कि मानेनन् भन्ने झगडा चलिराख्या छ, नियम फेरि’हाल्छन् । गर्ने के हो ?
मेरो विचारमा यो व्यवस्था’मा दलहरुको कार्यशैली सुधार्नका लागि २/३ वटा काम सुरु गर्नुपर्छ होला । पहिलो, यो व्यवस्थामा हामीलाई राज’नीतिक दल चाहिएको चुनाव लड्न हो । त्यसो हुँदा चुनावको प्रणालीमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने राज’नीतिक दलहरु यस्तै हुन्छन् । चुनावमा खर्च हुने पैसा, चुनावमा प्राप्त हुने टिकट, चुनावको चिन्ह लगायतका केही प्रणा’लीमा हामीले काम गर्नु पर्नेछ ।
यिनै हुन भर्खरै बिवाह गरेर जीवनको नयाँ सुरुवात गरेका २५ वर्षीय शाही, श्रीमतीले श’वलाई अंगालो हालेर ध’रधरी रोईंन
June 23, 2021 admin समाचार 10160
November 29, 2020 admin समाचार 9813
June 6, 2021 admin समाचार 4774